တရုတ်စိတ်ကြိုက်အသေးစား MOQ လွင်ပြင်လက်ဆောင်အမြှုပ် Mesh Trucker ဦး ထုပ်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | ရက်ကန်း
5- Panel ကို ဦး ထုပ်
Trucker ဦး ထုပ်
ပလတ်စတစ်မျက်လုံး ၇ လုံးခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
L / C, T / T, Weatern ပြည်ထောင်စု
ထုပ်ပိုး: တစ်အိတ်ထဲမှ 50pcs မှထို့နောက် polybags4ကိုပုံးထဲသို့ပုံးထဲထည့်ပါ။ သေတ္တာအရွယ်အစား - ၆၈ * ၄၅ * ၃၈ စင်တီမီတာ (သို့) သင်၏လိုအပ်ချက်ကြောင့်အမြန်နှုန်းကိုအတည်ပြုရန်အမြန်ကြေးတောင်းခံပါ။
အရေအတွက် (အပိုင်းအစများ) 1 - 1000 1001 - 10000 > 10000
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ) 10 14 ညှိနှိုင်းခံရဖို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်ထဲမှာဒီအဖုံးစတော့ရှယ်ယာအလွတ်အမြှုပ်ထရပ်ကား ဦး ထုပ်ပေးနိုင်ပါသည်,
ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူထုံးစံပုံနှိပ်ကွက်ထရပ်ကား ဦး ထုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
စတော့ရှယ်ယာလွင်ပြင်ထရပ်ကား ဦး ထုပ်ကို3ရက်အတွင်းကယ်တင်နိုင်သည်။
သင်၏အမှာစာသည် 5000pcs ထက်နည်းပါကအမြှုပ်ထုပ်ထုပ်များထုပ်ခြင်းကို ၅-၇ ရက်အတွင်းကယ်ဆယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ထုပ် ဦး ထုပ်များအတွက် moq 1 pc ဖြစ်ပါသည်,
ထုံးစံအရပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် logo trucker ဦး ထုပ်သည်အရောင် / ဒီဇိုင်းနှုန်း 20pcs ဖြစ်သည်။
ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုသည်မှာအပူလွှဲပြောင်းခြင်း၊ သူတော်ကောင်းတရားရှိခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊
၁ 100% polyester (အမြှုပ်နှင့်ကွက်)
၂။ အရောင် အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ ချောင်းအစိမ်း၊
3. အရွယ်အစား ၅၈ စင်တီမီတာ၊ မည်သည့်အရွယ်အစားကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
4.Logo လွင်ပြင် (သို့) ပုံနှိပ်ခြင်း (အပူကူးပြောင်းခြင်း၊ သူတော်ကောင်းတရား၊ မျက်နှာပြင်၊ ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်း)
5. ချည်ကြိုး / နံရံ polyester, ငါတို့ကိုလည်းဝါဂွမ်း, ကျန်းမာထည်စေနိုင်သည်
၆ ပလတ်စတစ်ထိပုံးပိတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သတ္တု၊ မှော်တိပ်ခွေများပြုလုပ်နိုင်သည်
၇ နမူနာ: 3work ရက်, အကြီးစားထုတ်လုပ်မှု: preproduction အတည်ပြုပြီးနောက် 21 ရက်
၈ 50 pcs / poly / polybag, 200 pcs / carton 68 * 48 * 45cm
၉ လေကြောင်း၊ ပင်လယ်၊ သို့မဟုတ် FedEx၊ DHL၊ UPS သို့မဟုတ် TNT စသည့်လေကြောင်းဖြင့်
၁၀ Tianjin, Shanghai, သို့မဟုတ်အခြားဆိပ်ကမ်းများ
ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ L / C, T / T, Western Union၊ ငွေဂရမ်၊ ဘဏ်ငွေလွှဲ
၁။ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ရန်အတွက်စသည်ဖြင့်ဝါဂွမ်း၊ acrylic၊ ပတ္တူ၊ ကူဒိုရာ၊ သိုးမွှေး၊ နိုင်လွန်၊ သားရေ၊
2. အမှတ်တံဆိပ်အတွက်, ငါတို့ပန်း, ပုံနှိပ်, သားရေ patch ကို, သတ္တုလိုဂို, applique ရှိသည်, ငါတို့သည်သင်တို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုအဖြစ်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
3.We OEM နှင့် ODM ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့, welcom ထုံးစံမှလာကြ၏။
ရေမြှုပ် Trucker ဦး ထုပ်အတွက်လိုဂိုစတိုင်များ
မြှုပ်ထရပ်ကား ဦး ထုပ်၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
မေးခွန်း ၁။ သင်၏အနည်းဆုံးအမှာစာမှာအဘယ်နည်း။
အဖြေ: ကျွန်ုပ်တို့၏အမြှုပ်ထရပ်ကား ဦး ထုပ်သည်မိနစ်အလိုက်မှာဒီဇိုင်းတစ်ခုစီအတွက်အရောင် ၁၀၀ ဖြစ်သည်
မေးခွန်း ၂။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ရနိုင်မလား။
အဖြေ: Sure.OEM / ODM ကိုကြိုဆိုပါတယ်။
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်တံဆိပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ထုပ် / ဦး ထုပ်တွင်တင်နိုင်ပါသည်။ သင်မ ၀ ယ်ခင်သင်၏အတည်ပြုချက်ကိုပြသပါမည်။
မေးခွန်း ၃။ နမူနာနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အချိန်သည်အဘယ်ကာလဖြစ်သနည်း။ နမူနာဘယ်လောက်ကျပါသလဲ
အဖြေ - နမူနာအတွက် ၅ ရက်နှင့် ၁၄ ရက်ကြာသည်။ အချိန်အတိအကျသည်သင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်မှာယူမှုပေါ်မူတည်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုနမူနာပေးပို့နိုင်ပေမယ့်နမူနာစွဲချက်တင်နေကြသည်။ အမှာစာအတည်ပြုပြီးပါကနမူနာကြေးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ပေးချေပါမည်။
မေးခွန်း ၄ ။
အဖြေ: ဦး ထုပ်၏သတ်မှတ်ချက်များကိုအတည်ပြုပါ -> စျေးနှုန်းကိုအတည်ပြုပါ -> သက်သေ -> အတည်ပြုနမူနာ -> စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ငွေသွင်းခြင်းနှင့်အမြောက်အများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုစီစဉ်ခြင်း -> ထုတ်လုပ်မှုပြီးစီးခြင်း -> စစ်ဆေးခြင်း (ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်ထုတ်ကုန်) -> လက်ကျန်ငွေပမာဏ -> ပေးပို့ခြင်း -> - ပြီးနောက်အရောင်းဝန်ဆောင်မှု။
အဖြေ: ကျွန်ုပ်တို့သည်အလီဘာဘာလုံခြုံသောငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပါသည်။ Western Union၊ T / T သို့မဟုတ် L / C ကိုသင်မြင်တွေ့ရပြီဖြစ်သည်။ သင်စတင်ထုတ်လုပ်ရန်သိုက် ၅၀% ပေးရမည်၊ တင်ပို့မှုမပြုမီငွေပမာဏကိုပေးသင့်သည်။ သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီပို့ဆောင်ပေးခြင်းကိုအာမခံသောကုန်သွယ်မှုအာမခံချက်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။
မေးခွန်း ၆။ အရည်အသွေးကိုသင်မည်ကဲ့သို့အာမခံနိုင်သနည်း။
အဖြေ - ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ထားသော၊ ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားများနှင့်တင်းကျပ်သော QC စနစ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ ၁၀၀% စစ်ဆေးရမည်။
ထုံးစံသဘာဝဖိုင်ဘာ Eco-Friendly ဆေးခြောက် ...